भण्डारखाल पर्व (१८६३) - विकिपिडिया
यहाँले, जंगबहादुरको हत्या गर्न षड्यन्त्र गरिएको चर्चित हत्याकाण्डको लागि, भण्डारखाल पर्व हेर्नुहोस्।
वि.सं १८६३ वैशाखमा हनुमानढोकाको भण्डारखाल बगैचामा एक हप्तासम्म राजनैतिक नियतले रणबहादुर शाहको हत्याको अनुसन्धानमा चौतारिया शेरबहादुर शाहका गुटका भारदारहरूलाई मृत्युदण्ड दिइयो । यस घटनाको सुरुवात काजी त्रिभुवन खवास (प्रधान)को बेलायतीसंगको सम्बन्धमाथि छानबिन भयो । बेलायती नक्स मिसनको स्थापना हुनुमा दोषी ठहरिएपछि काजी त्रिभुवनले चौतारिया शेरबहादुर शाह, काजी नरसिंह गुरुङ लगायत सबैको पोल खोलिदिए ।
वि. सं. १८६३ वैशाख
भण्डारखाल बगैचा, वसन्तपुर दरबार क्षेत्र
बालनरसिंह कुँवरद्वारा शेरबहादुर शाहको हत्या
काजी त्रिभुवन खवास (प्रधान) तथा काजी नरसिंह गुरुङसहित ९३ लाई मृत्युदण्ड
भीमसेन थापा नेपालको मुख्तियार नियुक्त
ललित त्रिपुरा सुन्दरी नेपालको राजमाता घोषित
थापा वंश र गुटका भारदारहरू चौतारिया गुटका भारदारहरू
बम शाह शेरबहादुर शाह
त्रिभुवन खवास (प्रधान)
१.१ रणबहादुर शाहको हत्या
२ हत्याको सिलसिला
३ त्यस पश्चात्
नेपालको राज्यकोषबाट शेरबहादुर शाहीले रु. १८,०००/- झिकी भ्रष्टाचार गरेको कुरा खुल्यो र खजाञ्ची त्रिभुवन खवास पनि त्यस दोषका भागी भए । वि. सं. १८६३ बैशाख १४ गते राती त्रिभुवन खवासको घरमा भारदारी कचहरी बस्यो । राज्यकोषका हर्ताकर्ता त्रिभुवन खवास ज्यादै चलाख र सम्पन्न परिवारका थिए । उनै त्रिभुवन खवासले राज्यकोषबाट रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार बढाएको प्रमाण प्राप्त भएकाले त्यस्को छानबिन गर्न राजकचहरी बस्नु परेको थियो । मानिसको ज्यान लिने कुरा परेमा राती सभा बोलाउने परम्परा नेपालमा भएकाले त्यसो गरिएको थियो ।
रणबहादुर शाहको हत्यासम्पादन
रणबहादुर शाहले त्रिभुवन खवासलाई काट्ने र शेरबहादुर शाहका आँखा फोर्ने आदेश दिए। त्यति छलफल भएर बेलुकीको खाना खाने बनेर भीमसेन थापा चौतारिया रणोद्योत शाहको भान्छामा गए। शेरबहादुरले रिसको झोकमा रणबहादुर शाहलाई तरबार प्रहार गरे। थिलोथिलो गरी काटिएका रणबहादुर शाहले अंगरक्षक बालनरसिंह कुँवरलाई पुकारे। तत्कालै राजाका अंगरक्षक बालनरसिंह कुँवरले तलवार झिकी पूर्व राजाका हत्यारा शेरबहादुरलाई काट्दा शेरबहादुरको पनि मृत्यु भयो । यसमा बम शाहको बालनरसिंहप्रति समर्थन देखिन्छ ।
राजकुमार रणोद्योत शाहका घरमा खाना खान गएका तत्कालीन काजी भीमसेन थापाले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरे । दोषी ठहरिएकालाई भण्डरखाल बगैंचामा मृत्युदण्ड दिइयो; जसमा ९३ जना परे । मृत्यदण्ड पाउनेहरू मुख्यतय शेरबहादुर शाह पक्षका भारदारहरू थिए जसमा काजी त्रिभुवन खवास र काजी नरसिंह गुरुङ थिए ।
शेरबहादुर शाहीका दुई अंगरक्षक तत्काल काटिए। र, शृङ्खलाबद्ध हत्या सुरु भयो। काजी त्रिभुवन प्रधान र नरसिह गुरुङ थुनिए। शेरबहादुर शाहीका दाजु विदुर शाही नजरबन्दमा परे। पाल्पाली राजा पृथ्वीपाल सेन र उनका भाइ त पाटन दरबारमा नजरबन्दमा राखिएका थिए। यस दुर्दान्त घटनासँग उबीहरूको कुनै लेनादेना थिएन। रातमै निरपराध उनीहरूलाई त्यहाँबाट झिकाइयो। हेलम्बुमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी महारानी राजराजेश्वरीलाई पनि जतिसक्दो चाँडो त्यहाँबाट राजधानी काठमाडौँ मा ल्याउन भनी रातैमा रिसल्लाहरू त्यतातर्फ दौडाइए।
चौतारा विदुर शाह, काजी त्रिभुवन प्रधान, काजी नरसिंह गुरुङ, राजा पृथ्वीपाल सेन तथा यिनका भाइ चौतारा रणबहादुर सेन समेत कडाइका साथ कैदमा परिसकेका थिए। रणबहादुर शाहको हत्यामा उनीहरूको हात थियो कि थिएन र थियो भने कसकसको केकस्तो हात थियो भन्ने कुराको कुनै छनबिन तथा पुर्पक्ष नै नगरी भोलिपल्ट नै राजभवन भित्र कै भण्डारखालको बगैंचामा यिनीहरू सबै काटिए। चौतारा विदुर शाहीका नाबालक छोराहरू सम्मले पनि बोल्ने अवसर पाएनन् र काटिए। काजी त्रिभुवन प्रधान र काजी नरसिंह गुरुङका छोराहरू मात्र होइनन्, नातिहरू पनि विष्णुमती नदीमा पुर्यायी काटिए।
पाल्पाली राजा पृथ्वीपाल सेन र यिनका १८ जना निरपराध पाल्पाली अंगरक्षक पनि भण्डारखाल बगैंचामा काटिए। दाहसंस्कार गर्न समेत नदिई यिनीहरू सबैको लासलाई अमानवीय व्यवहार गर्दै दाम्लोले घिसार्न लगाई विष्णुमती नदीको बगरमा फाल्न लगाएर स्याल तथा गिद्धहरूलाई खुवाइयो। चौतारा विदुर शाह तथा शेरबहादुर शाह दुवै भाइका निरपराध श्रीमती एवम् छोरीहरू अमानवीय तरिकाले बलपूर्वक पोडेहरूलाई सुम्पिए। त्यसको अर्को दिन १३ अरू भारदार मारिए । राजराजेश्वरी १४ सुसारेहरूसँगै सति जान बाध्य पारिइन्। यसरी दुई सातासम्म लगातार हत्या शृङ्खला चलेको थियो, जसमा १६ महिला र ७७ पुरुषले ज्यान गुमाए, बाबुराम आचार्यले मृत्यु हुनेको संख्या यही टिपाएका छन् । 'यो हत्याकाण्ड कोतपर्वभन्दा पनि घटिया थियो, यसमा राति सुतिरहेका बालक र वृद्धलाई पनि छाडिएन,' इतिहासकारद्वय तुलसीराम वैद्य र तीर्थप्रसाद मिश्रले लेखेका छन् ।
आफ्ना प्रायः सबै विरोधीको एकै पटक संहार पूरा गर्‍ काजी भीमसेन थापा अब नेपाल अधिराज्यका एक मात्र निष्कण्टक अधिनायक बने। यिनको स्वेच्छाचारिता माथी अङ्कुश लगाउन सक्ने व्यक्ति नेपालमा अब कोही पनि बाँकी थिएन। यसपछी भीमसेन थापाले बालक राजा श्री ५ गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहबाट मुख्तियार वा राजप्रतिनिधिको पद पनि प्राप्त गरे। "अब उप्रान्त अधिराज्यका चौतारा तथा काजी सबैले मुखियार भीमसेन थापाले लगाए अह्राए अनुसारका कामकाज गर्नू" भन्ने लालमोहर गराएर, आफ्नो अनुकुल रहेकी स्वामी महाराज रणबहादुर शाहकी नवविवाहिता किशोरी रानी ललितत्रिपुरा सुन्दरीलाई भने सती जान बाट रोकी राजमाताको हैसियत प्रदान गरेर यिनैलाई बालक राजा गीर्वाण युद्ध विक्रमको संरक्षिकाका रुपमा नियुक्त गर्न पनि यिनी सफल भए। उनीहरूकै भाषामा, 'यो हत्याकाण्ड नेपालको इतिहासमा राजनीतिक परिवर्तनको घटना थियो ।
अब राजपरिवारबाट भारदारमा शक्ति र सत्ता हस्तान्तरण भयो। राजपरिवारको भूमिका न्यून हुँदै गयो । नरसंहार गरी सत्तामा आउने परिपाटी देखापर्‍यो । यस्ता घटनाहरू पुनरावृत्ति हुँदै गए। अन्ततोगोत्वा यस्तै हत्याकाण्डबाट जंगबहादुर सत्तामा आए । यस अर्थमा भीमसेन थापा जंगबहादुरका मार्गदर्शक देखिन्छन् ।' 
↑ नेपालको तथ्य इतिहास, काठमाडौँ: साझा प्रकाशन, २०६१, पृ: १९४।
↑ नेपालको तथ्य इतिहास राजाराम सुवेदी पृष्ठ २०१
↑ बाबुराम आचार्य (फागुन २०६१), अब यस्तो कहिल्यै नहोस्, फाइनप्रिन्ट बुक्स, पृ: ७५, आइएसबिएन 978-9937-665-40-7।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=भण्डारखाल_पर्व_(१८६३)&oldid=1002532" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन १० मे २०२१, १५:३१
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १५:३१, १० मे २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।